ကဲတောင်းထားတဲ့ လူ ၄ ယောက်လောက် ရှိမလားမသိဘူး ခန့်မှန်းခြေ . ခဏခဏပူဆာနေတဲ့ ညီလေး အဲ့စာအုပ်ထဲကအတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ဘာတွေပါသလဲ ဆိုရင် အောက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ် .
ကွန်ပျူတာ ၂ လုံးအား အလွယ်ကူဆုံး Net work ချိတ်ဆက်နည်း
file များ၊ printer များအား network ချိတ်ဆက်ပြီး မျှဝေသုံးစွဲနည်း
network game ကစားရန် ကွန်ပျူတာ ၂ လုံးအား network ချိတ်ဆက်ကစားနည်း
ကွန်ပျူတာ ၂လုံးထက်ပိုပြီး network ချိတ်ဆက်နည်း
အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်လိုသူများနှင့် ရုံးအတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာများအားလုံးကို internet အသုံးပြုနိုင်အောင် internet လိုင်းတစ်လိုင်းတည်းကို ကွန်ပျူတာများ ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်အောင်ပြုလုပ်နည်း
wirless Network ကို အသုံးပြုပြီး internet ချိတ်ဆက်ခြင်း
FTP ကိုအသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ကွန်ပျူတာအတွင်းမှ ဖိုင်များကို FTP server သို့ ပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံရယူခြင်း
Download mirrorcreator | Download ziddu | Download megashare | Download hotfile | Download filefactory | Download mediafire | Download ifile